MSEC Trading Agreement
ဤသဘောတူညီချက်သည် မြန်မာငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd (နောင်တွင် “MSEC” ဟုသုံးစွဲမည်) နှင့် လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ ကြားရှိ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန် ဝတ္တရားတို့အား ရှင်းလင်း ဖော်ပြနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
၁။ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်းအား ဖွင့်လှစ်လိုပါက MSEC တွင်ရှိသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် စာရင်းပိုင်ရှင်၏ အမည်ဖြင့် ဘဏ်ငွေစာရင်းအားဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၂။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် MSEC မှ ချမှတ်ထားသော ပုံစံဖြင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းအား ဖွင့်လှစ် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး MSEC မှလျှောက်လွှာအားစိစစ်ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ MSEC မှ သဘောတူ ခွင့်ပြုသည်မှအပ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ တစ်ဦးလျှင် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်းတစ်ခုသာ ဖွင့်ခွင့်ရှိပါသည်။
MSEC သို့ တင်ပြထားသောလျှောက်လွှာတွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်း အရာများတွင် ပြောင်းလဲမှုရှိပါကလုပ်ငန်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူသည် MSEC သို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရပါမည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပါက MSEC မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ၁။ လျှောက်လွှာပါ အကြောင်းအရာ ပြောင်းလဲခြင်းကို MSEC သို့ အသိပေးရန်ပျက်ကွက်သောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးဆက်များ ၂။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ၊ ဆူပူအုံကြွမှုများ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ နှင့် မျှော်မှန်း မထားနိုင်သော အဖြစ်အပျက်များမှဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးဆက်များ
၃။ ကွန်ပျူတာစနစ်၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း၊ စက်ပစ္စည်း ချို့ယွင်းမှု၊ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှု၊ ပူးတွဲ လုပ်ကိုင်သူများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နှောင့်နှေးမှုများ အစရှိသည့် MSEC ၏ တာဝန်ယူမှုအပိုင်းနှင့် မသက်ဆိုင် သောအကြောင်းအရင်းများမှဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများ
၄။ MSEC မှသတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာ အစ ရှိသည်တို့တွင် ဖြည့်သွင်းထားသော ထိုးမြဲလက်မှတ် နှင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ချိန်တွင် ဖြည့်သွင်းထားသော ထိုးမြဲလက်မှတ်အား သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီး ၎င်းတို့နှစ်ခု ကြားတွင်ကွဲလွဲမှုမရှိကြောင်း ယူဆပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသောအရောင်းအဝယ်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများ ၅။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် MSEC သို့ အကြောင်း ကြားခြင်းမရှိဘဲ MSEC ၏ ဘဏ်စာရင်းသို့ ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း ကြောင့် ၎င်းငွေစာရင်းသို့ ရောက်ရှိလာသောလွှဲငွေ၏ ရင်းမြစ်အား အသိအမှတ် ပြုမှု နောင့်နှေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ။
ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် ၎င်းမှတဆင့်အွန်လိုင်းဖြင့် အရောင်း အဝယ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုသူ မည်သူမဆို အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့်မရပါ။ (၁) တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အစိုးရအမိန့်နှင့် ဒီကရီများ အရ တားမြစ်ထားသည့်လုပ်ဆောင်မှုများ။ (၂) အခြားသူ တစ်ယောက်၏ အသုံးပြုမှုကို ချိုးဖောက်ခြင်း (သို့) ယိုယွင်းစေခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခု၊ အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်း၊ သတင်း အချက်အလက်၊ စာရင်း သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ ကွန်ရက် တစ်ခုခုကို တရားမဝင်သောနည်းဖြင့် ဝင်ရောက်ရယူအသုံးပြုခြင်း(သို့)နှောင့်ယှက်ခြင်း။ (၃) ဤစာပိုဒ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ပါက အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ်ဝန်ဆောင်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း၊ အားလုံး ကိုလည်းကောင်း ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမပြုဘဲ ရပ်ဆိုင်းခြင်း ခံရမည်။
ဤသဘောတူညီချက်နှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်၍ MSEC နှင့် လုပ်ငန်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူတို့အကြားတွင် အငြင်းပွားမှု တစ်စုံ တစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါက အဆိုပါ အငြင်းပွားမှုကို နှစ်ဘက် ငြိမ်းချမ်းစွာ စေ့စပ် ညှိနှိုင်း ဖြန်ဖြေသော နည်းလမ်းဖြင့် ဦးစွာဖြေရှင်းကြမည်ဟု သဘော တူပါသည်။ အကယ်၍ အငြင်းပွားမှု စတင် ဖြစ်ပေါ်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း အထက်ပါ နည်းလမ်းအတိုင်း ဖြေရှင်း၍ မရနိုင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသောတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပါက စာချုပ် အားဖျက်သိမ်းပါမည်။ ၁။ MSEC ဘက်မှ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ သို့ စာချုပ် ရပ်စဲရန် ကမ်းလှမ်းခြင်း ၂။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူဘက်မှ MSEC သို့ စာချုပ်ရပ်စဲရန် ကမ်းလှမ်းခြင်း
၁။ ယခု သဘောတူညီချက်သည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက် နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပေါ်မူတည်၍ MSEC မှ ပြောင်းလဲ မှု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့်အချိန်တွင်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပါမည်။
၂။ သဘောတူညီချက်အား ပြောင်းလဲပြီးသည့်နောက် သတ်မှတ် ထားသော အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်းတွင် လုပ်ငန်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူထံမှ ကန့်ကွက်မှု မရှိပါက၊ လုပ်ငန်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် သူသည် အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုအားသဘော တူညီသည်ဟုယူဆပါမည်။
MSEC တွင် တပ်ဆင်ထားသော လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ ကိုယ်တိုင်အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နိုင်သော ကွန်ပျူတာ နှင့် အင်တာနက်မှ အမှာစာသည် စနစ်ထဲသို့ စာရင်းသွင်းထားပြီး ဖြစ်သည့် ခန္ဓာဇီဝဆိုင်ရာ အချက် အလက် နှင့် Login Password သည် အရောင်း အဝယ်လုပ်ချိန်တွင်ရှိသော အချက်အလက် နှင့် ထပ်တူကိုက်ညီမှုရှိမှသာ လျှင် အရောင်းအဝယ်အား စတင်နိုင်ပါမည်။
ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်းမှ ငွေထုတ်ယူမည် ဆိုပါက လုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် မိမိ၏ ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ ငွေလွှဲပြောင်း ပေးရန် MSEC မှ ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အတိုင်း MSEC သို့ ကြိုတင်၍ အကြောင်း ကြားရပါမည်။
၁။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှ MSEC သို့အဝယ် အမှာစာ တင်နိုင်သောပမာဏသည် MSEC မှ ချမှတ်ထားသောပမာဏ အတွင်းသာ ဖြစ်ရပါမည်။ ၎င်းပမာဏ ကို MSEC မှ ချမှတ်ထားသော နည်းလမ်းအရ သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှ MSEC သို့ အရောင်း အမှာစာ တင်နိုင်သော ပမာဏမှာ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူထံမှ MSEC က လက်ခံရရှိထား သော (သို့မဟုတ်) စီမံခန့်ခွဲပေးနေရ သောပမာဏ ထက် မကျော်လွန်ရပါ။
၃။ ရှယ်ယာ၊ ငွေတိုက်လက်မှတ်၊ ငွေတိုက်စာချုပ် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသော ပမာဏသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ဝယ်ယူရန် လျှောက်ထား သော ပမာဏအား (လုံးဝ) မရရှိခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ မိမိအဆိုပြုထား သော ပမာဏထက်နည်းသော ပမာဏကိုသာ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိခြင်းသော် လည်းကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၄။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူမှ လက်ခံရရှိထားသော အမှာစာ အား ကွန်ပျူတာစနစ်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် စတော့အိပ်ချိန်း (သို့) ဗဟိုဘဏ် သို့ မပေးပို့ နိုင်ခဲ့လျှင် MSEC သည် ၎င်းအမှာစာ အား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
၅။ MSEC မှ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားရှိသော တန်ဖိုး (Price) (သို့) ပြန်ရနှုန်း (Yield) များအတိုင်း လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ အနေနှင့် ငွေတိုက်လက်မှတ်/စာချုပ် များကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် MSEC မှ သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများအရ ငွေတိုက်လက်မှတ်/စာချုပ်များကို မိမိတို့သတ်မှတ်ထား သော ပြန်ရနှုန်း (Yield) များအတိုင်း မူလဈေးကွက်မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။
MSEC သည် အမြတ်ဝေစု၊ အတိုး နှင့် နှစ်စေ့များကို လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူများ ကိုယ်စား ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ဝေသူများ ထံမှ ဦးစွာလက်ခံရရှိပါသည်။ ထိုလက်ခံ ရရှိသော ပမာဏအား လုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအသီးသီး မှ ကြိုတင် သတ်မှတ်စာရင်းသွင်းထား သော ဘဏ်စာရင်းများသို့ (သို့) ချက်လက်မှတ်များဖြင့် MSEC မှ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးပါမည်။ MSEC မှ ထို အမြတ်ဝေစု၊ အတိုးများနှင့် နှစ်စေ့ များကို မလွှဲပြောင်းနိုင်ခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူထံမှ တောင်းဆိုခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း MSEC မှ ထိုပမာဏအား လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ၏ ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်း၌ ထည့်သွင်း ထားရှိပါမည်။ အကယ်၍ MSEC အား ကြိုတင်ပေးရမည့်အတိုး (Accured Interest) ကို လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူမှ ပေးချေရန်ကျန်ရှိပါက MSEC မှ ထိုရရန်ရှိသောပမာဏအား နှုတ်ယူထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁။လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ၏ အင်တာနက်မှ တဆင့် ပြုလုပ်သော ရှယ်ယာအတွက်အမှာစာများကို လက်ခံရရှိသော အချိန်ကိုသာ အတည်ပြု ပါမည်။ ၂။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ အသုံးပြုသော ကွန်ပျူတာ နှင့် စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုသည် အကန့်အသတ်ရှိနိုင်ပါသည်။
၁။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူသည် စကားဝှက် (Login Password) အား မကြာခဏ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်စီမံ ခန့်ခွဲ ရပါမည်။ ၂။ MSEC ၏ ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ သည် စကားဝှက် (Login Password) ကို လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းခြင်း မရှိ သောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက်ကို MSEC မှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
၁။ MSEC သည် အီလက်ထရောနစ်ပုံစံဖြင့် မှတ်ပုံတင် ထားသော စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ နှင့် အစိုးရမှ ထုတ်ဝေသော ငွေတိုက်လက်မှတ်/ ငွေတိုက်စာချုပ်များ ကိုသာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ MSEC မှ ဖြန့်ဝေသော အစီရင်ခံစာများ နှင့် အခြားမှတ်တမ်း များကိုအီလက်ထရောနစ် ပုံစံဖြင့် ဖြန့်ဝေမည်ကို လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူများမှသဘောတူညီသည်ဟုယူဆပါမည်။ ၂။ အစီရင်ခံစာ နှင့် အခြားမှတ်တမ်းများကို MSEC တွင်ထားရှိသော လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ ကိုယ်တိုင်အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နိုင် သောကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်မှတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၃။ အစီရင်ခံစာ နှင့် အခြားမှတ်တမ်းများကို MSEC ၏ သတ်မှတ် ထားသော အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာအထိ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ယခုသဘောတူညီချက်ပေါ် အခြေခံ၍ ဖွင့်လှစ်ထားသော ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ် စာရင်းတွင် ငွေကြေးနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို စီမံခန့်ခွဲမည် ဖြစ်ပါသည်။
MSEC သည် လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် MSEC ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခွဲခြား၍ စီမံခန့်ခွဲပါမည်။
၁။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှ လက်ခံရရှိသော အမှာစာ သည် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါက MSEC မှ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အရောင်းအဝယ် ဝန်ဆောင်ခ ကို လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူမှ ပေးချေရပါမည်။
၂။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူသည် အခြားသော ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီသို့ လက်ကျန် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် စာရင်းအား လွှဲပြောင်း ခြင်းတွင် MSEC မှ ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားသောစာရင်း လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်ခကိုပေးချေရပါမည်။
၃။ အစီရင်ခံစာအစရှိသည့် စာရွက်စာတမ်း တို့အား ဖြန့်ဝေပေးခြင်း အတွက် လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ မှ MSEC သို့ ကြိုတင် သတ်မှတ်ထား သောဝန်ဆောင်ခကိုပေးချေရပါမည်။ ၄။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းမှ လုပ်ငန်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ ထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်း အတွက် MSEC မှ ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်ခကို ပေးချေရပါမည်။
၁။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှ ပြုလုပ်သည့် မည်သည့်အရောင်း အဝယ်မဆို ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများက စာဖြင့်ရေးသား၍ဖြစ်စေ၊ နှုတ်မိန့်ဖြင့်ဖြစ်စေ ထုတ်ပြန်သော (သို့) ပြင်ဆင်သော (သို့) ဖြည့်စွက်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များအရ ဆောင်ရွက် ရမည်။ ၂။ MSEC သည် လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှ ပြုလုပ်သည့် အရောင်းအဝယ်များ နှင့်/သို့ ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း (သို့) ရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမပြုဘဲ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၃။ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှ အောက်ပါအချက်များကို အချိန် တိုင်းလိုက်နာလုပ်ဆောင်ပါမည်ဟုဝန်ခံကတိပြုပါသည်။ (က) လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့အား ကျူးလွန်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် မည်သည့်အရောင်းအဝယ်ကိုမဆို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ၊ ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ (ခ) ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုအား တိုက်ဖျက်ခြင်း တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ပြည့်စုံမှန်ကန်သော သတင်း အချက်အလက်များကို လုပ်ငန်းဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူမှ ပေးပို့ပါမည်။
၁။ MSEC သည် လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ စာရင်း နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ အား စတော့အိပ်ချိန်း နှင့် ရှယ်ယာထုတ်ဝေသည့် ကုမ္ပဏီအစ ရှိသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းသို့ ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရပေးပို့ပါသည်။
၂။ MSEC သည် လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှ MSEC သို့ ပေးပို့ထားသော ဘဏ်ငွေစာရင်းအား စတော့အိပ်ချိန်းသို့ အကြောင်းကြား ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
အများပြည်သူ နှင့် လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ သိရှိစေရန် အသိပေးကြော်ငြာခြင်းများကို MSEC ၏ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် မှသာ ကြေငြာပါမည်။ ထိုသို့ အသိပေး ကြေငြာခြင်းဖြင့် MSEC နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများသို့ အသိပေးကြေငြာမှု သက်ရောက်သည် ဟု ယူဆပါမည်။
Download Here for MSEC Trading Agreement PDF
[Purpose of the agreement]
This agreement clarifies the respective rights and obligations of Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd (hereinafter, the “Company”) and clients.
(1)	When openingasecurities account, it is necessary for the client to haveabank account opened under the same name as the account name for the Company.
(2)	The securities account will be opened by the client making an application in accordance with the method prescribed by the Company and the Company consenting to the application.
(3)	Only one securities account per client can be opened, excluding cases recognized by the Company.
[Changes to notified items]
When making changes to items notified to the Company, the client will conduct change procedures with the Company immediately.
The Company shall not be liable if any of the following apply.
(1)	Damage caused by not conducting procedures such as those for changes to notified items
(2)	Damage caused by force majeure events including natural disasters, political changes, and strikes
(3)	Damage caused by circumstances the Company is not responsible for, including system, circuit, or equipment failures; power failures; and delays due to the negligence of outsourced contractors, etc.
(4)	Damage caused due to matters applied for after considerable care is given when comparing the signature contained on the Company’s prescribed application forms, etc. and the notified signature and they are recognized as the same
(5)	Damage caused due to delay, etc. of transfers to the client’s account due to the client transferring money to the deposit account designated by the Company without contacting the Company
Neither Client, nor those that access an online trading service through Client, may use an online service:
(1)	inaway prohibited by law, rules, regulation, order, notification, instruction or decree issued by any governmental authorities, stock exchange and/or regulated body;
(2)	inaway that could violate or impair anyone else’s use of it; or to try to gain unauthorized access to or disrupt any service, device, data, account or network.
Violation of the terms in this section may result in suspension of any part of or entire online trading service without prior notice.
Any dispute arising from or relating to this Agreement shall be settled firstly through amicable settlement between the Company and the client. If the dispute cannot be settled by such settlement within (90) days from the date of first occurrence of such dispute, the dispute shall then be resolved by Arbitration under the Myanmar Arbitration Law of 2016.
The contract will be canceled if any of the following items apply.
・If the Company submitsarequest for contract cancellation to the client.
・If the client submitsarequest for contract cancellation to the Company.
[Changes to this agreement]
(1)	This agreement will be changed if there have been changes to the relevant laws and regulations or if deemed necessary by the Company.
(2)	If there are no objections from the client withinacertain period of time following the changes to the agreement, it will be deemed that the client has consented to the changes.
II. Deposits and withdrawals, buy and sell orders
Transactions are commenced for orders from the Company’s securities exchange corner terminal and the Internet when the registered login password matches at the time of the transaction.
[Deposit and withdrawal procedures]
The procedure for withdrawals from the securities account consists of transfers to the bank account notified by the client in advance in accordance with the Company’s prescribed methods.
[Buy and sell orders]
(1)	The amount of buy orders that can be placed by the client to the Company will be within the amount designated by the Company and this amount will be calculated in accordance with the method designated by the Company.
(2)	The quantity of sell orders that can be placed by the client to the Company will be within the number the Company has in custody or administers for the client.
(3)	For share, bill and bond available for subscription, there may be no allocation for the number of securities applied for or an allocated number of securities less than the number of securities applied for in some cases.
(4)	When orders received from client cannot be conveyed to the exchange or the CBM due to factors such as system failures, the Company may cancel those orders.
(5)	The Company presents eitheraprice orayield of bill/bond for buy and sell orders respectively, and such orders are executed at eitheraprice orayield of bill/bond which the client agrees. As per the designated way from the Company, the client can directly purchase bill/bond in the primary market with the proposed yield of the client.
(6)	When the foreign shareholding ratio exceeds the foreign buy order limit stipulated by YSX, the buy order placement from the client will be suspended and the existing buy order from the client will not be carried over.
(7)	The client can hold bill/bond issued by the government in the manner permitted by law, rules, regulation, order, notification, instruction or degree issued by any governmental authorities and/or regulated body
[Dividend, and interest and redemption]
The Company receives amount of dividend, interest and redemption from respective issuer on behalf of the client. The Company will transfer the received amount to the bank account registered in advance by the client , or will issueacheque for the received amount. When the Company is not able to do so or when the client requests otherwise, the Company will retain the received amount in custody in respective client’s securities account. In case where the Company bears an amount for an accrued interest which is not yet paid by the client, the Company will deduct such amount from the received amount of interest.
[Internet trading service]
(1)	The receipt of orders for shares entered by the client through the Internet shall be at the time the Company has received those transmissions.
(2)	Use of the service may be limited depending on the model of the computer or smartphone used by the client.
(1)	The login password will be managed inamanner so that the client takes steps such as regularly changing their password.
(2)	The Company shall not be liable for any damages incurred asaresult of the client not managing their login password appropriately.
[Dividend Payment and Voting Right]
The client’s shares amount which is exceeded foreign shareholding ratio limitation set byalisted company as the result of Report of Foreign Shareholding Amount on the Record Date, the exceed shares amount will be transferred to the Company’s owned account temporarily and those transferred share amount will be retransferred to the client’s account on next Business day of the Record Date.
The dividend payment for the exceed shares amount will be paid to the client’s account by the Company on the days after the actual payment date by the listed company.
The client will not have the voting right for the exceed shares amount.
III. Digitization of securities and reports
[Digitization of securities]
The Company only handles digitized securities including listed shares at the exchange and securities issued by the government.
[Digital delivery of reports and other documents]
(1)	It is the Company’s understanding that the client has consented to the digital delivery of reports and other documents.
(2)	Reports and other documents can be viewed from the Company’s securities exchange corner terminal and the Internet.
(3)	Reports and other documents can be viewed for the period designated by the Company.
IV. Administration of assets
[Cash and securities]
Cash and securities will be administered in the securities account opened based on this agreement.
The Company will administer the client’s assets separately from the Company’s own assets.
(1)	When buy and sell orders from client are executed, the Company will be paid the predetermined trade brokerage fee.
(2)	When the client transfers securities balance to another company, the Company will be paidapredetermined transfer fee in some cases.
(3)	When delivering documents such as reports, the Company will be paidapredetermined delivery fee in some cases.
(4)	When making withdrawals from the securities account, the Company will be paidapredetermined remittance fee in some cases.
(1)	Any transaction which the Client conduct shall be subject to and in accordance with the Anti-Money Laundering Law, and, whether written or oral, any other relative rules, directives, regulations, notifications, instructions issued, amended or supplemented by any relative authorities (hereinafter, the “AML Law”).
(2)	The Company may investigate, suspend or terminate transaction and/or any related business with the Customer without any notice in accordance with the AML Law.
(3)	The Customer represent and warrant that at all time;
(A)	the Customer has not conducted and will not conduct any transaction which intend to commit money laundering, financial terrorism or any action in kind.
(B)	the Customer will provide complete information regarding anti-money laundering and combatting financial terrorism.
[Information provision to external organizations]
(1)	The Company will provide client account information within the range stipulated by laws and regulations to external organizations including the exchange and issuers.
(2)	The Company will notify the exchange of the bank account the client has notified the Company of.
[Effectiveness of notices]
When notice items and all items the Client should be contacted about have been posted on either the MSEC’s website or MSEC Mobile Trading App, it shall be deemed that the Client has been notified.
Download Here for MSEC Trading Agreement (Eng) PDF